Gmail Account ဖွင့်နည်း (နောက်တစ်မျိုး) အထူး | UltraSurf ဖြင့် ထိုးဖောက်ကျော်လွှားခြင်း configure လုပ်ခြင်း ~ ITmanHOME
08:45 Gmail, နည်းပညာ No comments
Gmail Account ဖွင့်နည်း (နောက်တစ်မျိုး) အထူး | UltraSurf ဖြင့် ထိုးဖောက်ကျော်လွှားခြင်း configure လုပ်ခြင်း
Gmail Account ဖွင့်နည်း (နောက်တစ်မျိုး) အထူး
တစ်ခုအကြံပေးချင်ပါတယ် . Ultrasurf ကို သုံးမယ်ဆိုတိုင်း အသစ်ကို Download ချချပြီးမှ သုံးပါ . သူတို့က အမြဲတမ်း Update လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် version အသစ်ကို သုံးရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် . ဆိုက်က သေးသေးလေးပါ . မပင်ပန်းပါဘူး Download လုပ်ရတာ 1 MB over